कांग्रेसको छाया सरकारमा कोको भए ‘मन्त्री’ ? (सूचीसहित) - Maxon Khabar
Home / News / कांग्रेसको छाया सरकारमा कोको भए ‘मन्त्री’ ? (सूचीसहित)
कांग्रेसको छाया सरकारमा कोको भए ‘मन्त्री’ ? (सूचीसहित)
६ जेठ, ।
नेपाली कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाया सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति बनाएका हुन् ।
सरकारले एकातिर संविधान, विधि र प्रकृया विचेको छ भने अर्कोतिर जनतालाई सुविधा दिन सकेको छैन । अनियमिता, भष्टाचार बढेको छ । नारा र भाषणमा सुशासन भनेपनि जनताले अनुभूत गर्न सकेको छैन’ प्रमुख सचेतक खाँड भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले कामहरुको सुक्ष्म निगरानी र दबाव सृजना गर्न खोजेका हौं ।’